Ngalaba na EReaders niile
Todo eReaders bụ blọọgụ maka ndị na-eri akwụkwọ bụ, na mgbakwunye na akwụkwọ, chọkwara ịgụ ha na ngwaọrụ eletrọniki. Ihe omuma ichotara na blog a sitere na akwukwo rue na ngwa iji guo ha, site na ngwanrọ nke gha enyere gi aka igbanwe ederede gaa na dakọtara maka eReader gi.
Na ndị niile eReaders anyị na-ekwukwa banyere ndị nrụpụta kachasị mma nke ụdị ngwaọrụ a, nke ga - enyere gị aka ikpebi nke kachasị mma maka mkpa gị. N'aka nke ọzọ, ị ga-ahụkwa ozi metụtara ụdị ngwaike ndị ọzọ, dịka ngwa, mbadamba ma ọ bụ mgbanwe ị nwere ike ime eReader nke ị nwere.
Mana blog a agaghị ezu ezu ma ọ bụrụ na enweghị akụkọ dị ugbu a, ebe ị ga-ahụkwa mbipụta, akụkọ banyere ndị edemede na akwụkwọ n'ozuzu. Have nwere ngalaba niile dị n'okpuru. Nke anyi otu ederede Ọpụrụiche nwere ọrụ maka ịme ka emelitere ha ka ị dị ọhụrụ.